रवीको विषयमा मिडियामा बिरोध र समर्थनको होड गर्नेहरुको लागि ! - Muldhar Post
रवीको विषयमा मिडियामा बिरोध र समर्थनको होड गर्नेहरुको लागि !
टिकाराम वली २०७५, १ माघ मंगलवार 373 पटक हेरिएको
पुर्व पत्निको बिषयमा निकै चर्चा र विवादमा आएका पत्रकार रवि लामिछ्नेको बिषयमा पछिल्लो समय झन्डै कडाकडा धारणा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । केहिले रविको बिरुद्ध अनेकौं आरोप लगाईरहेका छन् ।केहिले रबि लामिछानेलाई भगवानको रुपमा हजारौंको आसुँ पुछ्दै मलम लगाउने पीडितहरुको भगवान हो नि भन्दै आएका छन् ।
मिडियामा बिरोध र समर्थनको होड नै चलेको छ । रबि लामिछानेले सामाजिक संजाल मार्फत आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत कुराहरु सर्वजनिक गरेका थिए । उनले सामाजिक संजाल फेसबुकमा राखेको स्टाटस अनलाइन मिडियाहरुमा प्रमुख समाचारको बिषय बनेर सामाजिक सञ्जाल ताती रह्यो । देश बिदेशबाट हजारौं नेपालीहरुले रविको पक्षमा समर्थन जनाउदै उनलाई दुखमा साथ र सयोग गर्ने आत्मविश्वास दिलाए । यसै बीच सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत विभिन्न सयमा खरो टिप्पणी गर्दै चर्चामा रहेका दाङका एक युवा टिकाराम ओलीले पछिल्लो समय फ़ेरि कडा टिप्पणी गरेका छन् । अर्धनग्नहरुले बिरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन भन्दै रबि लामिछानेको समर्थनमा खरोरुपमा अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
लेखक : टिकाराम वली
अर्धनग्न बन्दा हामीले बिरोध गरेका थियौ र ? अहिले आएर हजारौं पिडा बुझ्ने रबि लामिछानेलाई बिरोध कुन आधारमा भएको छ ? असल बिचार असल काम खोजेर होइन सबैले सहि मान्छेलाई साथ र सयोग गरेर पाइन्छ भन्ने उदाहरण फ़ेरि कालिकोटबाट सुरुवात भएको छ। अब त मलाई रबिका बिरोधिले आत्महत्या गर्लान् कि भन्ने डर लागेको छ ।कालिकोटमा रबिको काम सफल भए त्यहाँका जनताले भगवान कै रुपमा बुझ्नेछन् ।अनि बिरोधिहरु झुक्ने,आत्महत्याको बाटो रोज्ने वा सयोग गरेर गलती सुधार गर्ने । लामिछानेको सामाजिक कामबाट आतिएकाहरु यतिबेला रबि लामिछानेलाई सिधाउने दुस्साहसमा लागेका छन् । हो भगवानभाव, बुद्ध जस्तै मानवीय सेवाको लागी लाखौं मान्छेको आसुँ पुछ्दै कालिकोट पुग्ने रबि लामिछाने हो भन्ने बुझ्नु भयो कि?।के त्यो गलत हो” महासयहरु” जस्तै मानव जीवनको अनेकौं पिडामा सयोगमा जुट्ने रबि लामिछाने”विरुद्ध जुट्नेलाई मेरो कडा आलोचना छ । न्यायका निम्ति लड्नेहरुले अब फासी लगाएर मोर्नु पर्ने हो ? आलोचना पनि हद र सिमा हुन्छ नि? अर्धनग्न भएर अधिकार माग्न मिल्ने ?
हजारौंको पिडामा दिनरात जुट्दापनि बिरोध गर्ने कस्तो अधिकारकर्मी हो ? अनि बैधानिक र कानुनसंवदरुमा रबि लामिछाने र ईसा लामिछानेले सम्वन्धविच्छेत हुँदा किन मुर्छा परेका छौ ?पारिवारिक कुरालाई जोडेर जुन रुपमा रबिको लामिछानेको बिरोध भएको छ।के रबि लामिछाने कालिकोटमा स्थापना गर्न लागेको हस्पिटल गलत काम हो ?मैले अन्याय परेकाको आसुँ पुछ्दै न्याय दिलाउने मान्छे नै भगवानको हो भनेर भन्दा मेरो खिल्ली उडाउनेहरुलाई ।मान्छे बाच्न र समयमा मान्छेको उपचार होस् भनेर कालिकोटमा हिड्ने मान्छे भगवान नै हो ।यदि त्यो कामले हजारौं मान्छेले स्वास्थ पाउने छन् । जहाँ अन्याय भएको हुन्छ त्यहाँ न्याय दिने मान्छे पुग्छ अनि हामीलाई त्यही मान्छे भगवानको रूपमा याद आउछ । त्यहीँ नै धर्म गुरु हो ।इमान्दार र समाजमा केहि गर्छु भन्नेहरुलाई बहिस्कार गरेर समय बिताउनु भन्दा समाजमा केहि गर्छु भन्नेहरु जन्माउन लाग्ने कहिले ? विदेशका गल्लिमा बन्धक बनाएका नेपाली चेलीबेटी आसुँ बगाउँदा आसुँ पुछ्दै उदार गर्ने रबि लामिछाने” ति पीडित आसुँको भगवान नै हो । जनताले तिरेको करमा नेताहरु रमाएका छन्”अनि घुसखोर र भ्रष्टहरुको पर्दाफास गर्ने रबि लामिछानेलाई किन बिरोध ?
जनताको सेवा गर्छु भन्ने नेताहरु कुर्सीमा रमाएका छन् पैसामा अघाएका छन् । एउटा टिभीमा कार्यक्रम चलाउने रबि लामिछाने कहिले विदेशी बजारमा आसुँ बगाउने पीडितको खुसी फर्काउन लागेका छन् । कहिले भ्रष्टहरुको होस् अडाएका छन् ।कहिले घुसखोरहरुको सातो खाएका छन् ।कहिले कालिकोटमा मलम लगाउन पुग्छन् ।कहिले तराईका बस्तीमा खुसी बाड्न जुटछन् । टेलिभिजनको पर्दाबाट सबैको पिडा,गुनासो बुझेर”कहिले तराईमा जिल्लाहरु, कहिले पहाडका डाडाहरु,कहिले हिमालमा फेदीहरुमा सबैको दुख र पिडामा मलम लगाउदै छन् । आसुँ पुछ्दै छन् ।सबै जाती,भासा,धर्म, आस्था , संस्कार , पहिचान र अस्तित्व सबैलाई संमान बुझ्ने हामीले त्यहीँ कालिकोट पुग्ने रबि लामिछाने खोजेका छौ ।